Online ပေါ်မှ အမှန်တကယ်ငွေရှာနည်း (၂) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Online ပေါ်မှ အမှန်တကယ်ငွေရှာနည်း (၂)
Online ပေါ်မှငွေရှာနည်းဆိုတဲ့ Post တော်တော်များများဟာ Post တင်တဲ့သူရဲံ အကျိုးစီးပွားအတွက် Reader တွေကိုမက်လုံးပေးစည်းရုံးပြီး ဘယ်ဟာ လုပ်ရင်တော့
ဘယ်လိုဘယ်လောက်ပိုက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့ လိမ်ညာ တစ်ယောက်တည်းကောင်းစားဖို့ အများကိုရင်းရတဲ့ Post တွေများပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင် PTC ဆိုဒ်တွေမှာ Click လုပ်ဖို့Referral Link ပေးပြီး Sign Up လုပ်ခိုင်းတဲ့ ငွေရှာနည်း Post တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် ။ .......................................................................................................... ကျွန်တော်တင်မဲ့ Post တွေမှာတော့ Internet မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာလောက် ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံနဲ့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုပဲ ပြောပြပေးသွားမှာပါ ။ ........................................................................................................ အင်တာနက်မှာ ဘယ်လိုငွေရှာရတယ်ဆိုတာကို မပြောခင် အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ ဘာ့ကြောင့်ရတယ်ဆိုတာကို အရင်ပြောပြပါ့မယ်. ရေလိုက်မလွဲစေချင်လို့ ပါ။ တစ်ချို့ ဆို PTC တွေနှိပ်စက်မှုကြောင့် ကလစ်နှိပ်မှပိုက်ဆံရမယ်ထင်နေတဲ့သူတွေ တပုံကြီးပါ။ အင်တာနက်ရဲ့ အဓိကငွေဝင်ပေါက်ကတော့ ကြော်ငြာပါ ။ အခြားအခြားသော မအောင်မြင်သေးတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပေမယ့် အဓိက လူထုကို ပိုက်ဆံအများပြားဆုံးပေးနေတာကတော့ ကြော်ငြာတွေကပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မိမိတို့ ရဲ့ လုပ်ငန်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိစေနိုင်ဖို့ အတွက် အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ကြော်ငြာကြပါတယ် . . သူတို့ ရဲ့ Default Pay Rate ကတော့ လူတစ်ယောက်ကြည့်လျှင် တစ်ကျပ်(မြန်မာငွေ / 0.001 $) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြော်ငြာမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေရှိပါတယ် .. PTC ဆိုတာက တော့အဲ့ဒီ ကုမ္မဏီတွေလက်အောက်က အခွဲယူထားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကလစ်နှိပ်ခိုင်းပြီးသူက တစ်ဝက်စားရတဲ့ 50% 50% လူလည်စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် PTC Site တွေကိုကြော်ငြာတွေထည့်တောင်မထည့်ကြတော့ပါဘူး ၊ ကြော်ငြာကုမ္မဏီတွေကလဲ လက်ခံတော့ပါဘူး ။သူတို့ အချင်းချင်းကြော်ငြာတွေနဲ့ သာလည်ပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ......................................................................................................... ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံးကုမ္မဏီတစ်ခုအနေနဲ့ လူတွေကိုပိုက်ဆံအမြောက်အများရှာပေးနေတဲ့
ကုမ္မဏီတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူ့ ကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ် ။ Google Inc ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ခုမေးပါမယ် သင် သိပ်ကိုနာမည်ကြီးတယ်ငွေပေးတာအရမ်းမှန်တယ်ဆိုတဲ့
Clixsense တို့Adbuzz တို့ ကို Google နဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘယ်ကုမ္မဏီက
ပိုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်ပါသလဲ ၊ ပိုက်ဆံပေးတာပိုများနိုင်ပါသလဲ ။ သင့်အဖြေကိုတောင်နားမထောင်ပဲ ကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ် ။ ဒီတော့လမ်းလွဲကိုလိုက်မလို့ ပြင်ဆင်နေမိတဲ့သူတွေ ... ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ပါ။ ........................................................................................................ Google မှာကြော်ငြာရနိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ .. Google ရဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကအရမ်းများပါတယ် ။ သူ့ ဆီက ကြော်ငြာတစ်ခုရဖို့ တစ်နှစ်လောက်သင်ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ အဲရပြီ ဆိုရင်တော့ တစ်လလောက်နဲ့ အရင်းကြေသွားပါလိမ့်မယ် .. အဓကလိုအပ်ချက်ကိုပဲအရင်ပြောပါတော့မယ် .. တော်တော်ရှည်သွားလို့ ပါ ။ PTC သမားတွေကလဲ ဆက်ပြောရင် Report တင်ကြတော့မယ်ထင်ပါတယ် ။ လိုအပ်တာကတော့ ပရိသတ်ပါပဲ .. Fan ပေါ့ .. ဟုတ်ပါတယ် သင့်ကို ပေးတဲ့နှုန်းက တစ်ယောက်ကိုတစ်ကျပ်ပဲရှိတာဆိုတော့
သင့်မှာ ပရိသတ်နည်းနေလို့ မရပါဘူး .. သင်ဟာ Blog တစ်ခု ဖြစ်ဖြစ် ၊ Facebook Page ပဲဖြစ်ဖြစ် Youtube Channel ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဒါတွေနဲ့ ပိုက်ဆံရှာတော့မယ်ဆိုရင် သင့်မှာ အမာခံပရိသတ် သောင်းဂဏန်းကနေ သိန်းဂဏန်းအထိရှိမှရပါမယ် .. ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ပါ .. တစ်ယောက်ကို တစ်ကျပ်ပေးတယ်လေ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့ တာ PageView က ၅ သောင်းဆိုပါစို့.. သင်မြန်မာငွေ ၅ သောင်းရနေပါပြီ .. ဆိုကြပါစို့ သင့်ရဲ့ Page သို့Blog မှာ လူ ၃ သောင်း နေ့ စဉ်ကြည့်တယ်ဆိုပါတော့ .. သင့်ရဲ့ Blog ဟာ ဘယ်လို အမျိုးအစားပဲဖြစ်နေပါစေ .. တစ်ချို့ အရာတွေကိုသင် Download ရယူခိုင်းနိုင်ပါတယ် .. ဆိုကြပါစို့... သင့် Page မှာ ဒီလို Post တစ်ခုကို Adf.ly
ကနေပြီး Link ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် .. Fan တွေDownload မဆွဲပဲနေနိုင်မလား .. "" ** မိုးဟေကို အသစ်** "" /// ""** သဇင် ထွက်လာပြန်ပြီတဲ့ **"" ..... ဒါမျိူးတွေကိုသင်ဟာ Breaking News အနေနဲ့ တင်လိုက်လို့ လူ ၃ သောင်း Download ဆွဲလိုက်ကြပြီဆိုပါတော့ .. သင့်အိတ်ထဲပိုက်ဆံ ၃ သောင်းဝင်သွားပါပြီ .. သင့်ကို ၁၈+ Site လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် .. ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေက ကျား/မ အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ သတင်းတွေမို့ ပါ ... ...........................................................................................................
ဒီတော့လတ်တလော ပိုက်ဆံ တစ်ပြားနှစ်ပြားရနေတဲ့ အလုပ်တွေကိုလျှော့ပြီး ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေအောင် သင့်ရဲ့ Page တွေ Blog တွေကိုလူစိတ်ဝင်စား .. များပြားအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် Post တွေတင်ရင်းနဲ့ ကြိုးစားထားကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ... ခင်ဗျာ .. ..........................................................................................................